Dib-ugu-Noqoshada iskuulka 2021-22: U diyaargarawga sanad-dugsiyeed caadi udhow dayrta | Updates
Dib-ugu-Noqoshada iskuulka 2021-22: U diyaargarawga sanad-dugsiyeed caadi udhow dayrta
Sanad-dugsiyeed farxad wata ayaa ina haya. Iskuulada Nawaaxiga Osseo waxay u diyaar garoobayaan dib ugu noqoshada iskuulka iyagoo il gaara ku eegaya xeerarka caafimaadka iyo badbaadada xanuunka COVID-19. Sanad-dugsiyeedkan soo socdaa wuxuu u egyahay mid in yar ka duwan kii hore waxyarna u dhow kii caadiga ahaa.
Fadlan dib u eeg macluumaadka soo socda ee ku saabsan sida iskuulku u shaqaynayo dayrtan. Aad bay muhiim u tahay in la ogaado in macluumaadkani ku salaysan yahay tilmaamaha hadda ee ka yimi wasaaradda waxbarashada Minneota waana isbedeli karaa inta u dhaxaysa hadda iyo marka iskuulku bilaabmo iyadoo ku xirnaan doonta tilmaamo dheeraada oo ka yimaada gobolka.Fadlan email u dir WeListen@district279.org.
Iskuulada Nawaaxiga Osseo rajeynayaan inay ardayda dib ugu soo dhoweeyaan fasaladeena ayna bilaabaan sanad-dugsiyeed kale oo wacan Arbacada, Sept 8. Is arag dhow!
Ardaydu waxay iskuulka tegi doonaan shan maalmood usbuuciiba, si toosa. Haddii la doorbido waxbarashada online ka , waalidiinta/daryeelayaashu waa inay ardaydooda ka diiwaangeliyaan 279Online, a comprehensive online school for students kindergarten through grade 12.
Ardaydu waa inay raacaan nidaamka bedelashada degmada dhexdeeda mid la mida si ay uga wareegaan waxbarashada tooska ah iyo ta 279Online sidii ay samayn lahaayeen markay u wareegayaan iskuulada kale.
Talaalada iyo kiisaska la xaqiijiyey
Daawada Pfizer ee talaalka COVID-19 ayaa loo heli karaa ardayda jira 12 iyo ka weyn. Cadayn talaal loomagama baahan doono ardayda iyo shaqaalaha
Ardayda iyo shaqaalaha laga helay xanuunka COVID-19 waxaa la weydiisan doonaa inay guriga isku karantiilaan. Ardayda iyo shaqaalaha waxaa kaloo la weydiisan doonaa inay guriga isku karantiilaan haddii qof gurigooda ka tirsan laga helo COVID-19.Iskuuladeenu ma daba geli doonaan kiisas kale.
Ardayda iyo shaqaalaha waxaa lagu boorin doonaa inay ku dhaqmaan nadaafada caafimaadka shaqsiga ah, oo ay ku jiraan daboolida qufaca, maydhista gacmaha iyo joogista guriga markii la jiran yahay.
Weji daboolida/masks ka(La cusboonaysiiyey July 29, 2021):
Iyadoo la raacayo shuruudaha dawlada federalka ah ee raacista gaadiidka dadweynaha, ardayda iyo shaqaaluhuba waa inay xidhaan weji dabool markay saaran yihiin baska iskuulka
Marka gudaha iskuulka lagu jiro waa la dhiirigeliyaa, khasabse maaha in ardayda iyo shaqaaluhu xirtaan af dabool.Tani waxay la socotaa sida ay qabaan waaxaha caafimaadka iyo waxbarashada Minnesota.
Marka debeda iskuulka la joogo ardayda iyo shaqaalahaba lagulama talinayo inay af dabool xirtaan. Waxaa laga reebay oo keliya markii dad badani isu yimaadaan. Tani waxay la socotaa sida ay qabaan waaxaha caafimaadka iyo waxbarashada Minnesota.
Ururka Iskuulada Sare ee Minnesota ayaa go’aamin doona xirashada af daboolka ee ciyaaraha.
Kala fogaanshaha bulshada looma baahna, kooxaha fasalada dugsiyada hoosena lagama joojinayo isdhegalka dhigooda.
Tirada kooxaha lama xadidi doono ama ha yaraadaan ama ha bataan, oo ay ku jirto riwaayadaha iyo ciyaaraha.
Cuntooyinkii iskuulka ee caadiga ahaa way sii soconayaan iyagoo lacag la’aana oo ay ugu wacan tahay lacag laga helay waaxda beeraha Maraykanka. Inkastoo ay sidaas tahay, hadana aad bay muhiim u tahay in la soo buuxiyo Codsiga cuntada lacag la’aanta/qiimo-dhimista si loo sii wado in la helo adeegyadii lacag dhimista ahaa, sida ciyaaraha iskuulka iyo adeegyada internetka (markii aan u qalano).
Jeermis dilista iyo nadiifintu way sii socon doontaa. Jeermis dile heerka cusbitaalada ah ayaa lagu isticmaali doonaa iskuuladoo dhan
Iyadoo la raacayo hab maamuuska haboon, dadka booqashada ah mar labaad baa loo ogolaan doonaa inay iskuulada soo booqdaan. Faahfaahino dheeri ah, oo ay ku jiraan booqashada dadka tabaruca ku shaqeeya waxaa laydiin soo sheegi doonaa usbuucyada soo socda.
La wadaag qorshaha iskuulkaaga adoo soo buuxinaya foomamka dib-ugu-noqoshada iskuulka online laga bilaabo Aug. 9
Sanadkan, dhammaan foomamkii dib-ugu-laabashada iskuulka waxaa lagu buuxin doonaa online-ka ParentVUE. Foomamka qayb ka ah hawshaan waxaa ka mid ah kaararka xiriirka deg-dega ah, cusboonaynsiinta macluumaadka xiriirka qoyska (oo uu ku jiro bedelka ciwaanka) iyo diidmada siidaynta sawirada/milateriga.
Nidaamka foomamka dib-ugu-noqoshada iskuulka waxay bilaabmaysaa, Aug. 9. Si si fiican loogu diyaargaroobo, qoysaska aan weli isticmaalin ParentVUE waxay heli doonaan macluumaadkii ay ku geli lahaayeen oo email ahaan loogu soo diri doono maalinta Aug. 3. Fadlan ogow haddii aadan habkan hore u isticmaalin aadana helin email leh macluumaadkii lagu geli lahaa Aug. 3, macnaheedu waxaa weeye ma jirto wax email ah oo kuugu jirta faylka. Saas haday tahay, fadlan la xiriir iskuulkaaga si ay kuugu cusboonaysiiyaan macluumaadkaaga.
ParentVue wuxuu hayaa macluumaadka ardayga oo kala duwan, oo ay ku jiraan fasalka iyo gaadiidka uu raaco. Ardayduna waxay isticmaalaan hab kan la mid ah oo la dhaho StudentVue
Wixii caawin dheeri ah, fadlan la xiriir help@district279.org ama 763-391-7180.